मनाेरञ्जन Archives - News 88 Post
करिश्मा मानन्धरले फेसबुकमा नाम राखिन् ‘सूर्यकुमारी’
April 21, 2022 N88LeaveaComment on करिश्मा मानन्धरले फेसबुकमा नाम राखिन् ‘सूर्यकुमारी’
काठमाडाैं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नाम ‘सूर्य कुमारी’ थपेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम परै राखे पनि कोष्टमा ‘सूर्य कुमारी’ थपेकी हुन् । एमाले प्रवेश गरेपछि केही अगाडि एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले आफ्नो न्वारानको नाम सूर्य कुमारी भएको बताएकी थिइन् । आफू एमाले प्रवेश प्रसंगमा उनले न्वारानको नाम जोडेकी […]
‘ए मेरो हजुर ४’ले पहिलो साता कति कमायो ?
April 21, 2022 N88LeaveaComment on ‘ए मेरो हजुर ४’ले पहिलो साता कति कमायो ?
काठमाडौं । अनमोल केसी र सुहाना थापा अभिनित रोमान्टिक फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ बिहीबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ । वैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले पहिलो साता चार करोड रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । सुनिलकुमार थापा प्रोडक्सनले बिहीबार औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्दै पहिलो साता दिनमा ४ करोड १ लाख […]
April 21, 2022 N88LeaveaComment on केकी अधिकारीले कसिन् सुटुक्कै लगनगाँठो
काठमाडौँ । नायिका केकी अधिकारीले लगनगाँठो कसेकी छन् । वुधबार अधिकारीले आफ्ना प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुले आफ्ना सिमित आफन्तहरुका बीच विवाह गरेका हुन् । अधिकारीले विवाहका आफ्ना तस्वीरहरु भोलि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । केकी व्यवसायी रोहितसँग प्रेममा रहेकी थिइन् । आफ्नो सम्बन्धलाई सार्वजनिक नगरिकनै उनीहरुले विवाह गरेका हुन् । रोहित हाम्रो बजार डटकमका […]
आमा बनिन् काजल अग्रवाल
April 20, 2022 N88LeaveaComment on आमा बनिन् काजल अग्रवाल
काठमाडाैं । दक्षिण भारतीय अभिनेत्री काजल अग्रवाल आमा बनेकी छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकका अनुसार उनले मंगलबार छोरालाई जन्म दिएकी हुन्। केही समय अगाडि काजलले आफू गर्भवती भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी थिइन्। उनले गर्भावस्थाको फोटो सुट समेत गरेकी थिइन्। तर, काजलले आफ्नो बच्चाको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छैनन्। सन् २०२० को अक्टुबरमा काजलले व्यापारी […]
मिस नेपालका लागि आवेदन खुला, उचाइ र उमेरको मापदण्ड परिवर्तन
April 19, 2022 N88LeaveaComment on मिस नेपालका लागि आवेदन खुला, उचाइ र उमेरको मापदण्ड परिवर्तन
काठमाडौं । मिस नेपाल-२०२२ को आवेदन खुला भएको छ । आयोजक द हिडन ट्रेजरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको जनाएको हो । असार ४ गते ललितपुरको गोदावरीस्थित तीन हजार दर्शक अट्ने सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा ग्रान्ड फिनाले हुने भएको छ । यसपटकको संस्करणमा भाग लिने प्रतियोगिताको मापदण्डमा केही परिवर्तन गरिएको […]
१२ दिनको छोरालाई छोडेर सुटिङमा भारती सिंह
April 16, 2022 N88LeaveaComment on १२ दिनको छोरालाई छोडेर सुटिङमा भारती सिंह
नयाँ दिल्ली । भारती सिंह सुत्केरी भएकाे १२ दिन मै काममा फर्किएकी छिन् । हास्य कलाकार आमा बनेको धेरै दिन बितेको छैन, तर कामको प्रतिबद्धताका कारण उनी शोको सेटमा फर्किएकी हुन् । अप्रिल ३ मा इन्स्टाग्राममा पारिवारिक तस्बिर सेयर गर्दै उनले आफू छोराकी आमा बनेको जानकारी दिएकी थिइन् । डेलीभरी भएको १२ दिनपछि भारती काममा […]
विवाह गर्दै गायिका मेलिना, सार्वजनिक गरिन् ‘इन्गेजमेन्ट’को तस्वीर
April 15, 2022 N88LeaveaComment on विवाह गर्दै गायिका मेलिना, सार्वजनिक गरिन् ‘इन्गेजमेन्ट’को तस्वीर
काठमाडौं । गायिका मेलिना राईले विवाह गर्ने तयारी गरेकी छन् । एरेञ्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँगको इन्गेजमेन्टको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै उनले विवाह गर्ने तयारी गरेको संकेत दिएकी हुन् । मेलिना र सञ्जीवले दुई वर्षअघि नै इन्गेजमेन्ट भने गरिसकेका छन् । इन्गेजमेन्ट गरेको तस्वीर भने मेलिनाले शुक्रबार मात्रै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुन् । आफूहरु चाँडै […]
यी राशिका युवतीहरू जीवनभर हदभन्दा बढी नै रोमान्टिक हुन्छन्
April 9, 2022 N88LeaveaComment on यी राशिका युवतीहरू जीवनभर हदभन्दा बढी नै रोमान्टिक हुन्छन्
काठमाडाैं । कोही रोमान्सको मामिलामा मौन बस्न रुचाउँछन् भने कोही रोमान्सको लागि उत्साहित महसुस गर्छन्। पार्टनरसँग रोमान्स गर्नु वा रोमान्टिक हुनुमा कुनै गल्ती हुँदैन । रोमान्सले प्रेमलाई बढाउँछ र दुई व्यक्तिलाई नजिक ल्याउँछ। यद्यपि सबैको रोमान्सको फरक फरक व्याख्या छ। सरप्राइज डिनर होस्, फूलले कोठा सजाउनु होस्, आफ्नो पार्टनरसँग गुणस्तरीय समय बिताउनु होस् वा कसैलाई […]
घरबाट ३ सय रुपैयाँ लिएर भागेका यश, यसरी बने सुपरस्टार
April 1, 2022 N88LeaveaComment on घरबाट ३ सय रुपैयाँ लिएर भागेका यश, यसरी बने सुपरस्टार
भ्वाइलेन्स…. भ्वाइलेन्स….. भ्वाइलेन्स ! आई डोन्ट लाइक इट। आई अवाइड…..बट……. भ्वाइलेन्स लाइक्स् मी। यो संवाद केजीएफ–२ को हो। यो फिल्म धेरै स्टार र एक्सनका कारण चर्चामा छ। र, योसँगै अभिनेता यश पनि हेडलाइनमा छन्। यो मूलतः कन्नड फिल्म हो। केजीएफको पहिलो भाग २०१८ मा कन्नड र हिन्दीलगायत धेरै भाषाहरूमा रिलिज भएको थियो, फिल्म पनि हिट […]
हेर्नुहोस्, रश्मिकाको हाई इन्टेन्सिटी वर्कआउट रुटिन
March 31, 2022 N88LeaveaComment on हेर्नुहोस्, रश्मिकाको हाई इन्टेन्सिटी वर्कआउट रुटिन
काठमाडाैं । पुष्पा फेम रश्मिका मन्डन्नाको फिगर देखेर तपाईलाई पनि त्यस्तै बन्न मन लागेको होला तर के तपाईलाई थाहा छ रश्मिकाले यस फिटनेसको पछाडि कति मेहनत गर्छिन् ? उनको सुन्दरता र प्रतिभाले गर्दा नै उनी राष्ट्रिय क्रस बनेकी छिन् । यदि तपाईं पनि उहाँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ भने, अवश्य पनि उहाँको यो कसरत भिडियोबाट टिप्स […]